Madaxweyne Farmaajo oo kulan la qaatey denjirayaasha dalalka carabta – idalenews.com
Madaxweyne Farmaajo oo kulan la qaatey denjirayaasha dalalka carabta
Muqdisho(INO)- Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane, Maxamed Cabdullaahi Maxamed “Farmaajo” ayaa maanta ku qaabilay Muqdisho Danjirayaasha dalalka carabta ee ka howlgala caasimadda iyo wafdi ka socday Ururka Jaamacadda Carabta.
In loo fidiyo Soomaaliya gurmad degdeg ah si xad loogu yeelo abaarta lixaadka leh ee saameysay dadka, xoolaha iyo wax soo saarka beeraha.
Taageeridda Istiraatiijiyadda amni ku soo dabaalidda dalka Soomaaliya.
Taageeridda Qorshaha dib u heshiisiinta qaran ee Soomaaliya.
In Dowladaha iyo Shirkadaha Carbeed ay maalgashi ballaaran ku sameeyaan Soomaaliya, lana horumariyo kaabayaasha dhaqaallaha dalka.
In Dowladaha Carabta meel kasta oo joogaanba ay ku matalaan Soomaaliya, wakiilna ka ahaadaan, ilaaliyaanna xaqqeeda iyo mudnaanshaheeda.
Dhageyso: Xildhibaano Ka Tirsan Baarlamanka KGS Oo Radiyey Hadal Dhawaan Ka Soo Yeerey…
Donald Trump oo toos ugu hanjabay madaxweynaha dalka Iran Hassan Rouhani